Soomaali lagu Qabtay gudaha dalka Kenya Iyaga Oo safrinaya sonkor Sumeysan | Afrikada
Soomaali lagu Qabtay gudaha dalka Kenya Iyaga Oo safrinaya sonkor Sumeysan
Jun 18, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Afrikada, Nairobi:Waxaa maanta maxkamad la soo taagay rag ganacsato Soomaaliyeed ah oo ku nool dalka Kenya. Waxaa la sheegay in raggani asbuuc ka hor laga qabtay xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee Eastleigh.
Waxaa lagu soo qabtay sonkor la sheegay in dalkaasi ay ku geliyeen sharci darro. Waxaa eedeysanayaasha lagu soo eedeeyay ilaa 6 dacwadood oo qaar ka mid ah ay tilmaamayaan in raggaasu ay ka ganacsanayeen badeeco aan u fiicneyn isticmaalka bulshada isla markaana noloshooda qal-qal galineyso.
3-da eedeeysane ayaa magacyadooda lagu kala sheegay: Dahir Ahmed Hassan, Mohammed Dahir iyo Axmed Sheekh Maxamed waxaana horay loogu qabtay sonkor dhan 1,126 jawaan.
Dacwadaha kale ee lagu eedeeyay ayaa waxaa ka mid ah in badeecadaasi ay ku dhajiyeen shaabada been -abuur ah oo ay lee yihiin maamulka qiimeynta badeecooyinka ee loo gabsho KEBS.
Sidoo kale, waxaa lagu soo eedeeyay in ay iibinayeen saliida cunada oo gaareysay ilaa 648 konteenaro ah kuwaaso iyagana aan bulshada u wnaagsaneyn isticmaalkeeda, sida dowladdu ka dhawaajisay.
READ MORE: R/W Kheyre “Xukuumaddu way aqoonsantahay shahaadooyinka Jaamacadaha dalka”
Hase ahaate 3-dan ganacsade ayaa iska fogeeyay dhammaan eedeymaha loo jeediyay waxaana lagu sii daayay damiin lacageed oo dhan 300,000 midkiiba.
Dowlada Kenya ayaa horay u shegtay in la xoojiyay howlgal lagu beegsanayo sonkor kontroban ah oo la sheegay in ay sun kujirto isla markaana suuqyada ku jirto.
Tan iyo labadii isbuuc ee la soo dhaafay laamaha amniga Kenya ayaa howlgal ay fuliyeen ku s oo qab-qabtay sonkor loo safriyay degmooyinka Kakamega, Matuu iyo Machakos, waxaa kale oo la sheegay in si gaar ah sonkortaasi loogu daabulay degmooyinka Ruiru iyo Islii oo iyagana Nairobi ka wada tirsan.